XOG: Yaa gacanta ku haya Xarunta baarlamaanka Puntland, Maxaase socda waqtigan?
GAROOWE(P-TIMES) – Wararkii u dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Garoowe ayaa sheegaya in ciidamo badan oo katirsan kuwa Daraawiishta oo gurmad ahaan ugu yimi ciidamadii weeraray xarunta baarlamaanka ay hadda kusugan yihiin dhammaan jidadka soo gala xarunta golaha oo ay isku diyaarinayaan howlgal kale oo ay xarunta ku qaadayaan.
Baabuurta gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada difaaca ee Puntland kana soo baxay deegaanada Bixin iyo God-Qaboobe agagaarkiisa ayaa soo galay magaalada, kuwaas oo ku yimi amar ay ka heleen madaxda ka sareysa ee Puntland.
Sidaas oo kale ilaalada xarunta baarlamaanka ee kujira gudaha Xarunta ayay wararku sheegayaan in ay halkaas ka sameysteen difaacyo ay ku difaacayaan xaruntan, waxaana adag in la ogaado xaqiiqada gudaha ka jirta.
Wararkii u dambeeyey ayaa xaqiijinaya in ay ammaanka gudaha Aqalka baarlamaanka ay gacanta ku hayaan ciidamada Ilaalada baarlamaanka oo horeyba ugu sugnaa goobtan.
Ciidamada weeraray fiidnimadii caawa xarunta golahan ayaa kusugan dhammaan jidadka soo gala xarunta oo ay doonayaan in ay qabsadaan oo ay ka saaraan ciidamada ku sugan.
Warar ka madax banaan labada dhinac ayaa sheegaya in aysan soconin wax dadaal ah oo lagu baajinayo xaaladdaha taagan, qolo kastana ay damaceeda ka go`an tahay, xariiro aan la sameynay guddoonka baarlamaanka ayaan suuragal noo noqon.
LA SOOC WARARKEENA RIIX HALKAAN